6/26/2014 08:29:00 PM ghost knowledge
စာရေးသူ……သက်တန့်ချို (၂၆.၃.၁၀) အပြည့်အစုံသို့ »
6/21/2014 06:41:00 PM ghost
“မင်္ဂလာပါ..။ သူငယ်ချင်းမရှိလို့ ခင်ချင်လို့ပါ…”
“ဟိုင်း..ညီမ…” ….. ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့အကြား သံဃောဇဉ်ဟူသော ကြိုးသည် လေလှိုင်းထဲမှတစ်ဆင့် အသံမကြား ရုပ်မမြင်ရသော စာလုံးတွေနဲ့ ဖြစ်တည်လာခဲ့ရလေပြီ..။
ဒီနေ့ လပြည့်နေ့…။ ကျွန်တော့်မှာ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်တော် သူမကို အပြင်မှာ တွေ့ခွင့်တောင်း မည်။ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းမည်။ စကားတွေ ပြောကြမည်။ သူမရဲ့ အသံကို ကျွန်တော်ကြားဖူးချင်သည်။ သူမကို ကျွန်တော် မြင်ဖူးချင်သည်။ တွေးရင်းနဲ့ပင် ရင်ခုံသံ ဆူညံလာသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပြန်ပေးမိသည်။ သြော်… ရုပ်မမြင်.. အသံမကြားပဲနဲ့လဲ… ဒီလိုဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲလား..။
“အာ.. ညီမကလည်း…. အစ်ကိုတို့ ဒီလောက်တောင် ခင်နေပြီပဲ.. အကို့ကို မယုံတာလား..”
“အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး.. ညီမ မတွေ့ချင်ဘူး.. ညီမ လာတွေ့လို့မရဘူး..”
“ဘာလို့ လာတွေ့လို့ မရတာလဲ.. အိမ်ကမလွတ်တာလား..”
“အဲ့ဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး…. အကို မသိတာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်…”
“အကို မေးခွန်းတွေ မေးမယ်… ညီမ အကိုမေးတာ ဖြေနိုင်ရင် အပြင်မှာ မတွေ့ဘူး..၊ မဖြေနိုင်ရင်တော့ အပြင်မှာ တွေ့ကြမယ်…”
ကျွန်တော့်အကွက်ထဲ သူမရောက်လာသည်။ ကျွန်တော် လူလည်ကျတော့မည်။ မေးမှတော့ သူမ မဖြေနိုင်တာပဲ မေးမှာပေါ့လို့..။
“အကို အခုဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီဘာအရောင်လဲ…”
“အနီရောင်လေ… T-shirt လေး..”
အမလေးဗျ… ကျွန်တော်အမလေးကို တမိသည်။ ကျွန်တော် ဘာဝတ်ထားမှန်း သူမဘယ်လိုသိနေရတာလဲ..။ ရမ်းတုတ်လို့ မှန်သွားတာဖြစ်နိုင်သည်။
“အကို့ ဘောင်းဘီ ဘာအရောင်လဲ…၊ အကို အခု ဘာလုပ်နေလဲ..”
“အကို ပုဆိုးဝတ်ထားတယ်..၊ အညိုရောင်လေး..၊ အခုက အကို ကော်ဖီသောက်ရင်း စာရိုက်နေတယ်…”
အား…. ကျွန်တော် ကြောက်လန့်တကြား ယောင်အော်မိသည်။ ကျွန်တော် နောက်ကျော မလုံသလို ခံစားလာပြီး ဘေးဘီ ပတ်ကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့် အခန်းထဲတွင် ကျွန်တော်ကလွဲပြီး ကြွက်တစ်ကောင် ကြောင်တမြှီးမှ မရှိ။ ကျွန်တော်ယောင်ယမ်းပြီး laptop က camera ကို ပိတ်လိုက်မိသည်။ သူမ ဒီ camera နေများ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတာလား..။ ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိ။
“အကို့ အခန်းထဲမှာ ဘာပစ္စည်းတွေရှိလဲ…”
“စာကြည့်စားပွဲ၊ TV၊ ဂစ်တာ၊ ဗီဒို..၊ ထိုင်ခုံ ၂ လုံး…၊ တစ်လုံးက ကြိမ်ခုံလေး…ဟိ..ဟိ….”
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးတွေနဲ့ စိုရွှဲနေပြီ…။ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီး ဒီနေရာကနေ ထွက်ပြေးသွားလိုက်ချင်သည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အရဲတင်းပြီး
“နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးမယ်…. မင်း … ဘယ်သူလဲ….”
သူမထံမှ စာရိုက်နေတဲ့ သင်္ကေလေးမြင်လိုက်ရသည်။
“အကို ..ဘာလို့ အဲ့လောက်ထိ ကြောက်သွားရတာလဲ…”
“အမှန်အတိုင်းပြောရင် ညီမကို မခင်တော့မှာ ကြောက်တယ်..”
” ညာနေတာက ပိုဆိုးတယ်.. အမှန်အတိုင်းပြောပါ…”
“ညီမက …….. လူမဟုတ်ဘူး…”
ဘုရား ကယ်တော်မူပါ…။ လူမဟုတ်ဘူးတဲ့…။
“ညီမ နာမည်.. ဆုသက်ဝေ..၊ နေတာက တောင်ဒဂုံ၊ ညီမ အသက် က ၂၀၊ ညီမ ဆုံးတာ ဒီနေ့က ၁ လ ပြည့်တဲ့ နေ့ပဲ…”
“ညီမ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးရင်း လမ်းဖြတ်အကူးမှာ ကားတိုက်ခံရပြီး.. အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ခုလိုဖြစ်နေရတာ…”
“ညီမ လိပ်စာပေးလိုက်မယ်..၊ သွားစုံစမ်းကြည့်လိုက်…”
“မင်းမဟုတ်တဲ့ တစ်ကယ် ကားတိုက်ခံရတဲ့သူရဲ့ လိပ်စာကို မင်းက ပြောပြလို့ ရတာပဲလေ.. ”
“ဒါဆို.. အကို့ပါးစပ်ကလေ… ဆုသက်ဝေရေ…၊ ညီမကို အကို့ခြံဝန်းနဲ့ အခန်းထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုပါတယ်လို့ ပါးစပ်ကနေ သုံးခါပဲ ရွှတ်လိုက်.. အကို့ ရှေ့ ညီမရောက်လာမယ်….”
ကျွန်တော် စဉ်းစားရကြပ်သွားသည်။ ကြောက်ကလည်းကြောက်… အလျော့ကလည်း မပေးချင်တာနဲ့… လူလည်ကျပြီး ဘာမှ မပြောပဲနဲ့…
“အကိုကြောက်နေတယ်မှတ်လား..၊ အကို ဘာမှမပြောပါဘူး..၊ ညီမသိတယ်…”
ကျွန်တော် အားတင်းလိုက်သည်။ ရှိသမျှ သတ္တိတွေကို ရင်ဘတ်ထဲအကုန်ထည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့် သိချင်စိတ်က ကြောက်စိတ်ကို အနိုင်ရသွားခဲ့သည်။
“ဆုသက်ဝေရေ…၊ ညီမကို အကို့ခြံဝန်းနဲ့ အခန်းထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုပါတယ်..”
မျက်စိမိတ်ပြီး ပါးစပ်ကနေ အသံထွက်ပြီး အားရပါးရ သုံးခါ ပြောချပစ်လိုက်သည်။
ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာ ချက်ချင်းပိတ်သွားသည်။ ကျွန်တော့် အခန်းမီးတွေ အကုန်မှိတ်သွားသည်။ သွားပြီ..။ ကျွန်တော် မဟုတ်တာလုပ်မိပြီဟု တွေးမိချိန်သည် နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ..။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မသိစိတ်တွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ အခန်းထောင့် အမှောင်တစ်နေရာကို တွန်းပို့နေသည်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိနေသည်။
ကျွန်တော့်မျက်စိ အဲ့ဒီနေရာကို မကြည့်ချင်ပေမယ့် ကြည့်နေမိသည်။ အဲ့ဒီ မှောင်မှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်အခန်းထောင့်မှာ… တစ်ဖြည်းဖြည်း ပေါ်ထွက်လာတာက ခေါင်းက ဦးနှောက်ထွက်နေပြီး သွေးသံတရဲရဲနှင့် လက်ထဲမှာ ဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုင်ထားသော ကောင်မလေး တစ်ယောက်…။ ကျွန်တော် ကြောက်လန့်တကြား အော်ဟစ်ဖို့အချိန်မရသေးခင် သူမထံမှ စကားသံကိုကြားလိုက်ရသည်။
“ညီမနဲ့ နေရာလဲပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ အကို…”
ကျွန်တော်လည်း အခုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ Chat မယ့် online သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို ည ၁၂း၀၀ နာရီထိုးသည်နှင့် လိုက်ရှာနေမိတော့သည်။
အောင်ထွန်းဦး အပြည့်အစုံသို့ »
6/16/2014 08:27:00 AM ghost singapore-news strange-news
Singapore Raffles Place မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဓာတ်လှေကားထဲကို ဝင်လာစဉ်က လူရွယ်နှစ်ယောက်သာ ဝင်လာပြီး ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လူရွယ်နှစ်ယောက်ထွက်ပြီး နောက်ကနေ နှေးကွေးစွာ အဖွားအိုတစ်ယောက် တရွေ့ရွေ့ ထွက်လာတဲ့ video ပါ။
6/16/2014 07:26:00 AM ghost
Credit :အောင်ထွန်းဦး အပြည့်အစုံသို့ »
6/14/2014 10:56:00 AM funny ghost
ညအလုပ်ဆင်းပြန်လာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်မှာ လူတစ်ယောက် ကပ်ပါလာတယ်။ ဒါကို ကောင်မလေးက သတိထားမိပြီး လန့်နေမိတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အပြန်လမ်းမှာ သင်္ချိုင်းတစ်ခု ဖြတ်ရတယ်။ ကောင်မလေးက ဖြတ်ထိုးဥာဏ်သုံးပြီး ဂူတစ်ခုရှေ့ရပ်လိုက်တယ်။
အဲ…ဒီနောက် ဂူကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီး “အဖေ.. အဖေ.. သမီးပြန်လာပြီ တံခါးဖွင့်ပေးအုန်း” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ နောက်မှာကပ်ပါလာတဲ့ လူက ကောင်မလေးစကားကြောင့် ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူကို ကြည့်ပြီး ကောင်မလေး ရယ်မိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဂူနောက်ကနေ အသံတစ်သံ ထွက်လာတယ်။ “သမီးကလဲ.. သော့ယူသွားဖို့ မေ့ခဲ့ပြန်ပြီလား!” အသံကြောင့် ကောင်မလေး ဂူရှေ့ကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။
ကောင်မလေး ထွက်ပြေးသွားပြီးနောက် ဂူနောက်ကနေ ဂူဖောက်ထွင်းတဲ့ သူခိုးတစ်ယောက် ထွက်လာတယ်။ သူခိုးက “ငါ့အလုပ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ လူတွေ မှတ်လောက် သားလောက်အောင် ခြောက်ပစ်ရမယ်” ဆိုပြီး ရယ်နေခဲ့တယ်။
သူခိုးရယ်လို့ မပြီးခင် သူနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ မှတ်တိုင်ကိုင်ပြီး ရပ်နေတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်တယ်။ သူခိုးက “အဘိုးကြီး.. ခင်ဗျား ဘာလုပ်နေတာလဲ” လို့ မေးတော့ အဘိုးအိုက “တောက်.. ဒီလူတွေ ငါ့နာမည်ကို မှားအောင်ရေးကြတယ်ကွာ” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
အဘိုးအို စကားကိုကြားပြီး သူခိုးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ သူခိုးကိုကြည့်ပြီး အဘိုးအို တဟားဟားနဲ့ ရယ်နေခဲ့တယ်။ အဘိုးအိုက “ငါ့ စားကျက်ကို လုချင်တဲ့ကောင် မှတ်လောက်အောင် ဆုံးမရမယ်” လို့ ရေရွတ်လိုက်တယ်။ အဘိုးအို ရေရွတ်သံမဆုံးခင်မှာ လက်ထဲကသံတူရွင်း မတော်တဆ ပြုတ်ကျသွားတယ်။
တူရွင်းကို အဘိုးအို ကုန်းကောက်ဖို့ ခါးညွှတ်လိုက်တော့ ချုံထဲကနေ လက်တစ်ဖက်နဲ့အတူ “ဘယ်ကကောင်လဲကွ.. ငါမှတ်တိုင်ကို လျှောက်ဖျက်နေတာ” ဆိုတဲ့ အသံအသံ ထွက်လာတယ်။ အဘိုးအို ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပြန်တယ်။
အဘိုးအို ထွက်ပြေးပြီးနောက် သံတိုသံစကောက်တဲ့ လူတစ်ယောက် ချုံထဲကနေ ထွက်လာတယ်။ အဲဒီလူက မြေပေါ်ကျနေတဲ့ သံတူရွင်းကိုကောက်ပြီး “သံတူရွင်းရလည်း မဆိုးပါဘူး” ဆိုပြီး ထပြန်သွားတယ်..
အဲ့အချိန်မှာဘဲ..အဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို “ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ သရဲ”က ပြုံးနေလေသတဲ့ ……….
ထူးဆန်းထွေလာဤကမ္ဘာ မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ အပြည့်အစုံသို့ »
6/08/2014 11:45:00 AM ghost
ကြောက်တတ်ရင် ဘေးကင်းဆိုတဲ့စကားပုံက အဖေ့အတွက်တော့
မှားတယ်ကွ ။ အဖေရဲ့ အဖြစ်က မကြောက်တတ်လို့သာ ဘေးကင်း
ခဲ့တာ ။ အဖေများ အဲဒီအချိန်က ကြောက်တတ်ခဲ့ရင် ရူးရင် ရူး ၊
မရူးရင်တောင် ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ထွက်ပြေးပြီး ရပ်ကျော်
ရွာကျော် ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း ဖြစ်ကုန်မှာ ။ ကိုယ်က
ဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းလည်း ဟုတ် ၊ လူငယ်လည်းဟုတ်တော့ အခုလို
မကြောက်တတ်ခဲ့တာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းလို့ ပြောရမယ် ။
ခုတော့ လူအများရှေ့ မှာ အဖေက ဟီးရိုးလုံးလုံးကို ဖြစ်ရော ။
ကိုယ့်သမီးရှေ့ မှာမို့ ကြွားတာ မဟုတ်ဘူး ။ အဖေ့အဖြစ်မျိုးက
တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိဆို ကြောက်လွန်းလို့ သေသွားနိုင်တယ်ဟေ့ ။
အဲ့သည့်အချိန်တုန်းက တစ်အိမ်လုံး မသိခဲ့တဲ့လျှို့ ဝှက်ချက်ကို
အဖေ သမီးလေးကို ပြောပြမယ် ။
* မိုးလင်းသွားတဲ့အထိ သရဲခြောက်နေမှန်း အဖေ မသိလို့ပေါ့…
သမီးရဲ့  ။ နို့မဟုတ်ရင် အဖေလည်း လူပဲဥစ္စာ ။ ကြောက်တာ
ပေါ့ ။ ဒီလိုကွယ့်…။’
- ပျားလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနဆိုတာကို စာဖတ်သူတို့ ကြားဖူးကောင်း
ကြားဖူးပါလိမ့်မည် ။ ကျွန်တော်က ထိုဌာနမှ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦး
ဖြစ်၏ ။ ဌာနက ပျားပုံးများ လိုက်စစ်ဆေးရန်တာဝန်ပေး၍ တိုက်ကြီး
တစ်ဖက်ရှိ ဂျိုးဖြူစံပြကျေးရွာကို ကျွန်တော် သွားရောက်ခဲ့ရသည် ။
- ကျေးလက်ဒေသလေးဖြစ်သဖြင့် သစ်ပင်ပန်းပင် အုပ်အုပ်ဆိုင်း
ဆိုင်းညို့ ညို့ မှိုင်းမှိုင်းနှင့် နှစ်သက်ကြည်နူးဖွယ် ကောင်းလှသည် ။ လယ်ကွင်းများကလည်း တမျှော်တခေါ်ကြီး ကျယ်ဝန်းကာ စိုက်ပင်
ပျိုးပင်များဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်လျက် ရှိ၏ ။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်၂၀ကျော်
ကဖြစ်၍ လယ်ထွန်စက်များကို အသုံးမပြုကြသေးဘဲ ထွန်တုံးနှင့်နွား
ကို ရုန်းစေကာ လယ်ထွန်နေကြသောတောင်သူလယ်သမားများကို
ကြည့်ရင်း လေးစားကြည်ညိုစိတ်များ ဖြစ်မိသည် ။ ဤဒေသတွင်
စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအလုံအလောက် ရရှိစေရန် ချောင်းတစ်ခုကို
သွယ်တားပြီး ဆည်မြောင်းသဘောမျိုး ရေကာတာတစ်ခု ဆောက်
လုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရ၏ ။ ထိုရေကာတာအနီးတွင် အစောင့်တဲ
တစ်ခုလည်း ရှိသည် ။
- ကျွန်တော်က သဘာဝအလှတရားများကို ရေခပ်ဆင်းသော
လုံမပျိုများထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားတတ်သူ ဖြစ်ရာ ရွာထဲတွင် နေထိုင်
ရန် စိတ်မကူးပေ ။ ရွာထဲတွင် နေထိုင်လျှင် လာရောက်ဧည့်ခံသော
လူကြီးသူမများကို ပြန်လည်ဧည့်ဝတ်ပြုကာ စကားပြောနေရမည် ။
သို့အတွက် လယ်တဲတစ်တဲတွင် ခွင့်တောင်းနေထိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်
“ ငါ့တူက မောင်တိုးမြင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ မဟုတ်လား ။ မောင်တိုးမြင့်
က မှာလိုက်တယ် ။ ငါ့တူ ရွာကိုရောက်လာရင် ဒေါ်ကြီးတို့အိမ်မှာ
တိုးမြင့်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်
ဖြစ်သည် ။ ဘယ်အိမ်တွင် တည်းရမည်မှန်း မရေရာသော
ကျွန်တော့်အဖို့ ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် ဖြစ်သွားရသည် ။
“ ဟုတ်ကဲ့…ဒေါ်ကြီး ။ ဒါဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို လယ်တဲမှာပဲ
အိပ်ခွင့်ပြုပါလား ။ ကျွန်တော် ရွာထဲမှာ မတည်းချင်လို့ပါ ။”
ပို၍ တွန့်သွားသည်အထိ မျက်မှောင်ကျုံ့ လိုက်ပြီး…
“အင်း…ငါ့တူက မြို့ သားဆိုတော့ လယ်တဲမှာ နေနိုင်ပါ့မလား ?
ခြင်က ကိုက် ၊ အေးကလည်း အေးပါဘိ ။”
“ရပါတယ်…ဒေါ်ကြီး ။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လာလုပ်
တာ ။ ကျွန်တော် တကယ်နေတဲ့နေရာက ဇင်းကျိုက်မှာ ။ ရွာမှာဆို
ဒီလိုပဲ လယ်တဲမှာ အိပ်နေကျ ။”
ကျွန်တော် အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ပြောလိုက်သောစကားများ
ကြောင့် အဒေါ်ကြီး၏ ကျဉ်းမြောင်းသောမျက်လုံးများ ပြူးကျယ်သွား
“ငါ့တူက ဇင်းကျိုက်ဇာတိလား ? ဒေါ်ကြီးအမျိုးတွေလည်း
ဇင်းကျိုက်မှာ ရှိတယ်…ဒေါ်ပုမတို့မကွမ်းအိမ်တို့ဆိုတာ ဒေါ်ကြီးညီမ
“ အာ ! သိတာပေါ့ ။ သူတို့သားတွေနဲ့ကျွန်တော်က ငယ်သူငယ်ချင်း
သည်လိုနှင့် ဇင်းကျိုက်ရွာအကြောင်းပြောရင်း ဆွေမျိုးတွေစပ်လိုက်
ကြတာ ညနေစောင်း သွားပါရောလား ။ ဒေါ်ကြီးက လယ်တဲတွင်
သူနှင့်အတူ သားတို့လင်မယား နေထိုင်ကြောင်း၊ယခု ထိုလင်မယား-
ရွာထဲကအိမ် တွင် ဆီဆားသွားယူကြောင်း ၊ ကြာမီ ပြန်လာကြမည်
ဖြစ်ကြောင်း ၊ လယ်တဲ၌ ပျော်သလောက် နေနိုင်ကြောင်းတို့ကို
ဝမ်းပန်းတသာ ပြောပြရှာသည် ။ ငါးနာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်တွင် ဒေါ်ကြီး၏သားနှင့်ချွေးမ ဖြစ်သူတို့
အမောတကောဖြင့် ပြန်လာကြသည် ။
“ အမေ…အမေ့အစ်မ ဖျားနေလို့ ။ အဲ့ဒါ ဆေးခန်းသွားရမယ်တဲ့ ။
လိုက်သွားဖို့ကလည်း လူမရှိဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ အမေ အခု ပြန်မှဖြစ်
မယ် ။ လယ်တဲအတွက်တော့ မပူနဲ့ ။ ဒီမှာက သူခိုးလည်း မပူရပါ
ဘူး ။ ကျွန်တော်တို့လင်မယားလည်း စောင့်နေပါ့မယ် ။”
ခရီးရောက်မဆိုက်ပင် ပြောချလိုက်သော ဒေါ်ကြီး၏သား ကိုမြင့်မူ၏
စကားများကြောင့် ဒေါ်ကြီး စိတ်ပူသွားပုံရသည် ။ သို့ကြောင့်
ကျွန်တော့်ကို ဂရုစိုက်ရန် ၊ ဧည့်ဝတ်ကျေရန် မှာကြားပြီး အမြန်ထွက်
- ကျွန်တော်လည်း ရေချိုးကာ ကိုမြင့်မူ၏မိန်းမမမြထွေး ပြင်ဆင်ပေး
ထားသောထမင်းဝိုင်းတွင် ထမင်း ဝင်တွယ်လိုက်သည် ။ ဟင်းက
ချည်ပေါင်ဟင်းနှင့် ဝက်သားကြော်ဖြစ်၍ ထမင်း အလွန်မြိန်လှ၏ ။
စားသောက်ပြီးသည့်နောက် ထမင်းလုံးစီသည့်အနေဖြင့် တဲရှေ့ 
ပက်လက်ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ကာ ဝင်လုဆဲနေလုံးကြီးကို
ငေးကြည့်ရင်း ဇိမ်ရစ်နေမိသည် ။
“ဟို…အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်တို့လင်မယား ရွာထဲကဘုရားပွဲကို
ခဏသွားချင်လို့ ။ လယ်ကွင်းနဲ့ရွာနဲ့က သိပ်မဝေးပါဘူး ။ အဲ့ဒါ
အစ်ကို မနေခဲ့ရဲရင်လည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါလား ။”
“ ဟာ…သွားပါဗျာ ။ ရပါတယ်…ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း
နေရဲပါတယ် ။ ဘယ်အချိန်လောက် ပြန်လာမှာလဲ ?”
“ သိပ်မကြာပါဘူး ။ ၈နာရီ ၉နာရီဆို ပြန်ရောက်ပါတယ် ။”
ကိုမြင့်မူတို့လင်မယားက ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်
ခွာသွားကြသည် ။ နေက တဖြည်းဖြည်းနှင့် လယ်ကွင်းတွေ
နောက်ဘက်သို့ တိမ်ဝင်ပျောက်ကွယ်သွားသည် ။ မိုးချုပ်
သွားသည်အထိ ထိုင်စောင့်နေသော်လည်း ကိုမြင့်မူတို့လင်
မယားကား ပြန်မရောက်လာသေးချေ ။ ပျင်းရိလာသည်နှင့်
ကျွန်တော်လည်း အိပ်ခန်းထဲဝင်ကာ ခြင်ထောင်ချပြီးမှေး
- မည်မျှကြာအောင် အိပ်ပျော်သွားသည် မသိ…မီးဖိုခန်းဆီမှ
အသံဗလံများ ကြားရ၍ ကျွန်တော် လန့်နိုးလာခဲ့သည် ။ တောရွာ
ဒေသပေမို့ လျှပ်စစ်မီးကလည်း မရှိ ။ ခေါင်းရင်းက ကျောပိုး
အိတ်အတွင်းမှ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို ထုတ်ယူကာ ကျွန်တော်
မီးဖိုခန်းဆီသို့ ထွက်လာခဲ့သည် ။
ကိုမြင့်မူတို့လင်မယား ပြန်ရောက်နေလို့များလား ၊ ဒါမှမဟုတ်
တစ်နေရာတွင် ထောင်ထားသော အုန်းတံမြက်စည်းကို လှမ်းယူ
ကာ ခြေသံလုံလုံဖြင့်လျှောက်လာလိုက်သည် ။ လယ်စောင့်တဲ
ဟုဆိုသော်ငြားလည်း အတော် ကြီးမားကျယ်ဝန်းလှသည် ။
အလျားပေနှစ်ဆယ် ၊ အနံပေလေးဆယ်လောက် ကျယ်ဝန်းပြီး
သွပ်မိုး ၊ ထရံကာတဲကြီးဖြစ်သည် ။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း ၊ အလယ်
တွင် စင်္ကြန်လမ်း ရှိပြီး အနောက်ဖက်က မီးဖိုခန်းနှင့် ဆက်လျက်
ရှိသည် ။ သို့ပေမဲ့ တဲဆိုသည့် အတိုင်း အောက်ဘက်တွင်တော့
ဘာမှ ခင်းကျင်းထားခြင်း မရှိ ။ ကျွန်တော် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကို
ရှေ့ တည့်တည့်ဆီသို့ထိုးရင်း မီးဖိုခန်းထဲသို့ လာခဲ့သည် ။
အသံဗလံများက ကျွန်တော် လန့်နိုးလာစဉ်တုန်းကလောက်
မကျယ်လောင်တော့ပေ ။ ချွတ်ချွတ်ချပ်ချပ် အသံလောက်သာ
“ ဟာ! ဘာအနံ့လဲ… ။ တစ်မျိုးပဲ ။”
မီးဖိုခန်းထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်နှင့် နနွင်းနံ့က ထောင်းလမောင်း
ထနေသည် ။ အခြားဘာပစ္စည်းမှ ပျောက်ရှနေပုံ မပေါ်သဖြင့်
သူခိုးဝင်ခြင်းတော့ မဖြစ်နိုင် ။ လယ်ကွင်းထဲတွင်ဖြစ်၍ မြေကြွက်
အိမ်ကြွက်တွေတော့ ပေါများပေလိမ့်မည် ။ သို့ကြောင့် ကြွက်
သူခိုးလေးများ၏ လက်ချက်သာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်
တထစ်ချ ယူဆမိလိုက်သည် ။ အသံဗလံများက ထမင်း ဟင်း
အနံ့ရ၍ လာရောက်ကြသော ကြွက်သူခိုးများ၏ ဟိုတိုးသည်
တိုးအသံများဖြစ်ပြီး ဆနွင်းပုလင်းကိုလည်း ဝင်တိုးတိုက်ခဲ့ပုံရ
“ တောက် ! ကြွက်သူခိုးစုတ်တွေ…”
ကျွန်တော် ဒေါသထွက်စွာ ရေရွတ်လိုက်ရင်း ဆနွင်းနံ့ ပျောက်
ကင်းသွားစေရန် မှောက်နေသောဆနွင်းပုလင်းကို ဓါတ်မီး
အလင်းရောင်ဖြင့် ရှာဖွေကြည့်သည် ။ မတွေ့ ချေ။ ကြာတော့
ရှာတဲ့ကျွန်တော်သာ စိတ်လျော့လိုက်ကာ အခန်းထဲသို့ ပြန်
လာခဲ့သည် ။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ဆယ့်တစ်နာရီ
ခွဲတော့မည် ။ ကိုမြင့်မူတို့ ဘာကြောင့်များ ပြန်မလာသေးပါ
လိမ့် ။ တစ်နေကုန် ပျားပုံးများလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ရ၍ ပင်ပန်း
နေပြီမို့ အိပ်ရာပေါ် လှဲချလိုက်သည်နှင့် ပြန်လည် အိပ်ပျော်
“ ဟာ…တောက် ! အိပ်ရေးကို ပျက်တယ် ။ ကြွက်စုတ်တွေ…”
ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေသော ဆူညံသံတွေကြောင့် ကျွန်တော် ဖျတ်ခနဲ
လန့်နိုးလာသည် ။ မီးဖိုခန်းတစ်ခုလုံး အိုးခွက်သံများဖြင့်
သောသောညံနေ၏ ။ကျွန်တော် မုန်းတဲ့ ဆနွင်းနံ့ကလည်း
အိပ်ခန်းထဲအထိပင် သင်းလျက်ရှိသည် ။
“ ဒီ နနွင်းနံ့က တစ်မျိုး ။ တွေ့ မယ်…”
ကျွန်တော် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကို ယူကာ မီးဖိုခန်းသို့ ထွက်လာ
ခဲ့သည် ။ ကြွက်တို့၏ သဘာဝအတိုင်း လူလာပြီဆိုသည်နှင့်
အသံမျိုးစုံက ဗြုန်းဆို တိတ်သွားသည် ။ မီးဖိုခန်းထဲရောက်တော့
အပုန်းကောင်းသော ကြွက်များနှင့် နနွင်းပုလင်းကို ကျွန်တော်
ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့  ။ ကြာလာတော့ မျက်လုံး ကျိန်းစက်လာ
ပြီဖြစ်ရာ လက်လျော့ကာ အိပ်ခန်းဆီသို့ ပြန်လာခဲ့သည် ။
ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ရာပေါ် လှဲချလိုက်သည်နှင့် ချက်ချင်းပင်
“ ဟာ……ဒီကြွက်စုတ်တွေတော့ ။”
အသံတွေက ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေပြန်သည် ။ ကျွန်တော် နာရီကို
ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်နာရီလေးဆယ် ။ ဒီပုံအတိုင်းဆို
ကျွန်တော်က ပြန်အိပ်လိုက် ၊ ကြွက်သံတွေကြောင့် နိုးလိုက် ၊
ထကြည့်လိုက်နှင့် မိုးလင်းတော့မည် ။ မဖြစ်ချေ…မနက်ကျ
လုပ်ရမည့် အလုပ်တွေက ရှိသေးသည် ။ ကျွန်တော်- နဘေးမှ
စောင်ကို ဆွဲယူကာ ခေါင်းမြီးခြုံလိုက်သည် ။ နောက်တော့
အသံတွေ တိတ်မတိတ် မသိ...ကျွန်တော် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်
“ မောင်ခင်မောင်…ငါ့တူ… နိုးလာပြီလား ? လာ…ထမင်းစား ။”
ကျွန်တော် အိပ်မှုန်စုံဖွားဖြင့်အခန်းထဲကထွက်လာတော့ တဲရှေ့
ကွပ်ပျစ်တွင် ဒေါ်ကြီးရွှေဥက နံနက်စာ ထမင်းကြော်ဖြင့်
“ ဟာ…ဒေါ်ကြီး ဘယ်အချိန်က ပြန်ရောက်လဲ ? ဒေါ်ကြီးအစ်မ
ကော သက်သာရဲ့ လား ?”
ကျွန်တော့်အမေးကို ဒေါ်ကြီးက ခေါင်းညိတ်အဖြေပေးရင်း…
“ဒါနဲ့ မောင်မြင့်မူတို့လင်မယားကော?ဒေါ်ကြီး ရောက်တော့
သူတို့ကို မတွေ့ တော့ဘူး ။ ဘယ်သွားကြလဲ?”
“ ညကတည်းက ပွဲသွားကြည့်ကြတာ ခုထိ ပြန်မရောက်
ဗိုက်ဆာဆာဖြင့် ထမင်းကြော်ကို တွယ်ရင်း ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဖြေ
လိုက်သော ကျွန်တော့်စကားကြောင့် ဒေါ်ကြီး မျက်လုံး ပြူး
“ ဘာရယ် ! ဒါ…ဒါဆို ညက ငါ့တူ တစ်ယောက်တည်းပေါ့ ။”
“ ဟုတ်ကဲ့…ဒေါ်ကြီး ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ?”
“ ငါ့တူ ထူးထူးခြားခြား ဘာတွေ ကြုံသေးလဲ ?”
ဒေါ်ကြီးက အထိတ်တလန့် မေးလိုက်သဖြင့် ကျွန်တော်
ဘာဖြေလို့ ဖြေရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားမိသည် ။
“ ဟို…ဘာမှတော့ ထူးထူးခြားခြား မကြုံရပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ကြွက်
တွေတော့ အတော် သောင်းကျန်းတယ် ။ ဆူညံနေတာပဲ ။”
“ ကြွက်တွေ…ဟုတ်လား ။ ငါ့တူက ကြွက်တွေကို မြင်လိုက်လို့
“ဟာ…ဒေါ်ကြီးကလည်း ကြွက်တွေက ကျွန်တော် လာတဲ့အထိ
ဘယ်စောင့်မလဲ ။ အကုန် ထွက်ပြေးကုန်တာပေါ့ ။ ဒင်းတို့
ဝင်တိုက်ခဲ့လို့ နနွင်းပုလင်း မှောက်သွားတယ် ထင်တယ် ။
နနွင်းနံ့ကို နံနေတာပဲ ။”
“ နနွင်းနံ့…သြော်…နနွင်းနံ့ ။”
ဒေါ်ကြီးက ထိုစကားကိုသာ ရေရွတ်လိုက်ပြီး ဘာမေးခွန်းမှ
ထပ်မမေးတော့ချေ ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်တော့ အဒေါ်ကြီး
ဘိုးဘွားလက်ထက်က နနွင်းမို့လို့များ နှမြောနေသလား မသိ..
ဟု ခပ်ကြောင်ကြောင် တွေးလိုက်မိသေးသည် ။ ကျွန်တော်
ထမင်းစားသောက်ပြီး ပျားပုံးတွေ စစ်ဆေးရန်အတွက် ထွက်
သွားချိန်အထိ ဒေါ်ကြီး ဘာမှ မမေးတော့ ။ ပြန်သည့်နေ့ထိတိုင်
သူ့တဲတွင် တည်းခိုရန်သာ အတန်တန်မှာလျက် ရှိသည် ။
“ ဟဲ့…နင်တို့လင်မယား လုပ်ပုံ ကောင်းလား ? မောင်ခင်မောင်
ခမျာ မကြောက်တတ်သူမို့လို့သာ ။ နို့မို့ဆို ဘယ်နှယ့်နေမလဲ
မသိဘူး ။ နင်တို့ ဘာလို့ တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့တာလဲ ?”
ဒေါ်ကြီးက ကိုမြင့်မူတို့လင်မယားကို ဆူပူနေ၍ သူများ
သားအမိတွေကြား ဝင်မပါတာ ကောင်းပါတယ်လေ…
ဟု တွေးမိကာ ကျွန်တော် အိမ်ထဲသို့မဝင်သေးဘဲ အိပ်ပြင်၌
အသာရပ်နေလိုက်သည် ။ ကိုမြင့်မူတို့ ကျွန်တော့်ကြောင့်
အဆူခံနေရသည့်အတွက် စိတ်တော့ မကောင်းလှ ။ ကျွန်တော်
တစ်ယောက်တည်း နေခဲ့ရပေမဲ့ ဘာမျှထိခိုက်သည်လည်း
“အမေကလည်း…အမေ့ ချွေးမအကြောင်းလည်း သိရဲ့ သား
နဲ့ ။ သူက အမေ မရှိရင် အငြိမ်နေတာ မဟုတ်ဘူး…အမေရဲ့  ။”
“ ဟေ ! မြထွေး…နင် နင့်ယောက်ျားကို ဘာတွေ ပူဆာနေလို့
ဒေါ်ကြီးက သူ့သားနဘေးတွင် ကျုံ့ ကျုံ့ လေး ထိုင်နေသော
ချွေးမအား ခပ်ဟောက်ဟောက် မေးလိုက်သည် ။
“ ဟာ…မဟုတ်ရပါဘူး အမေရယ် ။ သူပြောတဲ့ အမေ့ချွေးမ
ဆိုတာ အစ်မရီဌေးကို ပြောတာ ။”
မမြထွေးက မရီဌေးဟူသော အမည်ကို ရေရွတ်လိုက်စဉ်
မျက်လုံးကလည်း ဟိုဟိုသည်သည် ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်
“သြော်…နင်တို့က နင်တို့မရီးကို ကြောက်လို့ပေါ့လေ ။
နင်တို့ကို နင်တို့ကျတော့ သနားပြီး ဧည့်သည်လေးကိုတော့
ပစ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ ။ သူ့ခမျာ သရဲချောက်နေမှန်းသိလျက်
သားနဲ့ ငါ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့မပြောရှာဘူး ။ကြွက်တွေ
သောင်းကျန်းတာပါ တဲ့လေ ။”
မဟုတ်ဘူးတဲ့လေ ။ ကြားလိုက်ရသည့်စကားကြောင့်
ကျွန်တော် တံထွေးတစ်ချက်ကို ဂလုခနဲ မြိုချလိုက်ပြီး သူတို့
ဘာဆက်ပြောမလဲ နားစွင့်နေလိုက်သည် ။
“မရီဌေးကို မကြောက်ကြပါနဲ့ဟယ် ။ ငါ့ချွေးမကြီးက သနား
စရာပါ ။သူ့ခမျာ သားသမီးသံယောဇဉ်ကြောင့် ဒီတဲက မခွဲနိုင်
ဖြစ်နေတာ ။ ငါ့ကိုလည်း ကြောက်ရှာပါတယ် ။ ငါရှိရင်
ဘယ်တုန်းက အရိပ်အယောင် ပြဖူးလို့လဲ ။ ဟဲ့…မြင့်မူ…
နင် ဟိုသူငယ်လေးကို အတင်း သွားမေးမနေနဲ့ဦး ။ သူ့ခမျာ
နင့်ကြောင့် သရဲချောက်ခံရတာ ။ နင် မေးလား မြန်းလား
“ ဟုတ်ကဲ့…အမေ ။”
သူတို့ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးဆုံးသွားသည်အထိ ကျွန်တော် အတော်
ကြာကြာ စောင့်နေပြီးမှ ဘာမှ မကြားသည့်ပုံစံဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး
ဝင်သွားလိုက်သည် ။ ကျွန်တော် ဝင်လာတော့ ဒေါ်ကြီးနှင့်
မမြထွေးက မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်သွားကြပြီ ။
“ ငါ့ညီ…မင်းက အတော် သတ္တိ ရှိတာပဲ ။ ငါတောင် ငါ့မရီး
ဖြစ်လျက်သားနဲ့ မနေရဲဘူးကွ ။”
“ သြော်…အစ်ကိုရယ် ။ သရဲဆိုတာ အပါယ်ဘုံသားတစ်မျိုး
ပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ထက် နိမ့်ကျပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ကြောက်
စရာ မလိုပါဘူး ။ ဒါနဲ့ အစ်ကို့မရီးက ဘယ်လို သေသွား
ကိုမြင့်မူက အတိတ်ကို ပြန်လည်တွေးတောမိကာ စိတ်
“တောရွာတို့ ထုံးစံအတိုင်း ကလေးမဖွားနိုင်လို့ပေါ့ ။ ဒီတဲ
မှာပဲ ဆုံးသွားတာ ။ မီးနေသည်ဆိုတော့ နနွင်းအမြဲလိမ်း
ရတယ်လေ ။ ဒါ့ကြောင့် အိုးသံ ခွက်သံ ပေးတယ် ။
နနွင်းနံ့ ပေးတယ် ။ ဒီလောက်ပဲ ချောက်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့
တစ်ခါတစ်လေတော့ သူ့ရုပ်ကို ပြတတ်တယ် ။ အစ်ကို
တောင် တစ်ခါမြင်ဖူးတယ်ကွာ။ ကြောက်စရာကြီး ။”
ကိုမြင့်မူက ကြက်သီးထသွားသည့်ပုံစံဖြင့် တစ်ချက်တွန့်ပြ
“ အစ်ကို…သူက အမြဲ ချောက်လန့်လား ?”
“ အမေ ရှိရင်တော့ မချောက်ဘူးကွ ။ သူက အမေ့ကို
ကြောက်ရတယ်လေ ။ ခုထိလည်း ကြောက်တုန်းပဲ
ထင်ပါရဲ့  ။”
“ သြော်…သနားစရာပဲနော် ။”
ကျွန်တော်က စုတ်တသပ်သပ် လုပ်ပြကာ တစ်ခြားအကြောင်း
အရာ တစ်ခုကို စကားလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်သည် ။ ထို့နောက်
ကျွန်တော့် ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအကြောင်း ဗဟုသုတရအောင်
ပြောပြ၊ ကိုမြင့်မူကလည်း စိုက်ပျိုးရေး အကြောင်းများ ရှင်းပြ
သည် ။ သည်လိုနှင့် မိုးချုပ်သွားခဲ့ရာ ထိုနေ့ညက ကျွန်တော်မှာ
ရင်တထိတ်ထိတ်…ဒေါ်ကြီး ရှိလျှင် အမှန်ပဲ မခြောက်လှန့်ဘူး
လား…ဟု သံသယပွားနေမိသည် ။ သို့သော် ထိုညက အမှန်ပင်
ဘာသံမှမကြားရတော့...ဆနွင်းနံ့လည်း မရချေ ။ နောက်နေ့
ညများလည်း ထိုအတိုင်းသာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် ပြန်သည့်နေ့အထိ
အေးအေးချမ်းချမ်း အိပ်စက်ခဲ့ရသည် ။ ပထမဦးဆုံးနေ့ညက
ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်တော် ယခုထိ မေ့
မရသေးပါ ။ သို့ကြောင့် ညနေခင်း မီးပျက်ချိန်ဆိုလျှင် တစ္ဆေ
ချောက်သော်လည်း ချောက်မှန်း မသိသဖြင့် သတ္တိရှိခဲ့သော
ကျွန်တော့်အကြောင်းကို ကျွန်တော့်သမီးများအား ဟာသ
တစ်ပုဒ်ပမာ မကြာခဏပင် ပြောပြတတ်ပါတော့သည် ။
( ဖခင်ကြီးပြောပြသော ဖြစ်ရပ်မှန်(ကိုယ်တွေ့)ဇာတ်လမ်းကို
ဆီလျော်သလို ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည် )
(၂၀၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လထုတ် ဂမ္ဘီရလောကမဂ္ဂဇင်း ) အပြည့်အစုံသို့ »
6/08/2014 04:48:00 AM articles ghost
(၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထုတ် ဂမ္ဘီရမဂ္ဂဇင်း)
- အမှန် ထိုနေ့က စာမူ သွားပို့ရန် အစီအစဉ် မရှိ ။ တကယ့်
တကယ်က သူငယ်ချင်းနှင့် ချိန်းပြီး YKKကြေးအိုး ဖြစ်ဖြစ်
CPကြက်ကြော် ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် စားနေကျ ရှမ်းဆိုင်တွင်
ချိန်းကာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ စားရင်း စကားပြောကြမည်ဟု
စဉ်းစားထားမိသော်လည်း သူငယ်ချင်းက သင်တန်း
အရေးကြီးသဖြင့် မအားလပ်သောကြောင့် တစ်ယောက်
တည်း ထွက်မိထွက်ရာထွက်လာရင်း စာမူသွားပို့ဖြစ်ခြင်း
ဖြစ်သည် ။ အိမ်၌လည်း မနေချင်…တစ်လလုံးနေမှ
တစ်ရက်သာ အားလပ်သော ဤနေ့တွင် ကျွန်မ
တစ်နေရာရာသို့ သွားချင်၏ ။
ဘုရားတစ်ဆူဆူကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ချင်သည် ။
ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကားစီးရလည်း အဆင်ပြေ
လမ်းကြောင်းလည်း သင့်သည့် ဆူးလေဘုရားသို့
သွားရန် 43 အထူးကား စီးရင်း ထွက်လာလိုက်သည် ။
- မိုးရာသီဖြစ်၍ မိုးသည် တဖွဲဖွဲ ရွာသွန်းလျက် ရှိပြီး
လမ်း၏ မြေနိမ့်ပိုင်းနေရာများတွင် ရေတို့ ပြည့်ဝင်အိုင်
ထွန်းလျက် ရှိကြ၏ ။ ကားမှန်သည် တစ်ဝက်ခန့် လှစ်ဟ
ပွင့်နေသောကြောင့် ထိုကားတံခါးပေါက်မှ ဝင်လာသော
မိုးရေစက်တို့သည် ကျွန်မ့မျက်မှန်ကို ပြေးဝင်တွန်းတိုက်
ကြ၍ မျက်မှန်နှစ်ဖက်လုံး မိုးရေစက်တို့နှင့် မှုန်ဝါးနေသဖြင့်
စာလည်း ဆက်ဖက်၍ မရတော့…။ ကျွန်မ ဖတ်နေသည့်
စာအုပ်က ဆရာတိုးထက် ရေးသားသည့် အံ့ဖွယ်ဝိညာဉ်
စာအုပ် ဖြစ်သည် ။ စာအုပ်သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်း
သလို အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်လည်း ကောင်းလှသည် ။
ဝိညာဉ်နှင့်လူ့ဘုံလောက၏ ဆက်နွယ်ကူးယှက်ပုံကို နိုင်ငံ
တကာကပင် အမှန် ယုံကြည်လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း
ဆေးပညာနှင့်တဖုံ ဒဿနနှင့်တသွယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ
အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်း ရေးသားတင်ပြထားသည် ။
- ကျွန်မ စာအုပ်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး အပြင်ဘက်သို့ ငေး
ရင်း စိတ်ကူးအတွေးတွေ ပွားများရှင်သန်နေလိုက်မိသည် ။
*လူတွေကြားထဲတွင် ဝိညာဉ်တွေကော သွားလာ နေထိုင်
နေလေမလား……လူတစ်ယောက်သည် မိမိ သေဆုံးသွား
သည်ကို မသိရှိသေးပါက ကျန်ရှိနေသောဝိညာဉ်သည်
သူတို့သာဓု မခေါ်ရသရွေ့ မကျွတ်လွတ်ကြသည်မှာ
အမှန်ပဲလား…အတွေးပင်လယ်ထဲတွင် ကျွန်မ နစ်မြော
ကားက ဘရိတ်ကို ဆောင့်နင်းအုပ်လိုက်သဖြင့် ကျွန်မတို့
ခရီးသည် အားလုံး ရှေ့သို့ ယိုင်ထိုးပြိုလဲမတတ် ဖြစ်သွား
ကြသည် ။ ကားဒရိုင်ဘာနှင့်စပယ်ယာထံမှ တပြိုင်နက်
ဆိုသလို ဆဲဆိုသံထွက်သွား၏ ။
“ သေချင်နေပြီလား ။ ကားလမ်းကို ကြည့်ကူးမှပေါ့။”
စပါယ်ယာ၏အော်ဟစ်ပြောဆိုသံကြောင့် ကျွန်မ မှန်ပြတင်း
ပေါက်က ခေါင်းအနည်းငယ် ပြူကြည့်လိုက်တော့ လူလတ်
ပိုင်းလူတစ်ယောက် တစ်ဖက်လမ်းဆီသို့ ယိုင်တိယိုင်ထိုး
ဖြင့် လမ်းလျှောက်သွားသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည် ။
သူ့ဆံပင်တို့သည် ပွယောင်းယောင်းဖြစ်နေပြီး ဝတ်ထား
သော ရှပ်အင်္ကျီအဖြူသည် မည်းညစ်ကာ ကျောအလယ်ပိုင်း
တဝိုက်တွင် ဆေးနီနီတို့ စွန်းထင်လျက် ရှိသည် ။
“ အမလေး…တော်သေးတာပေါ့ ။ ဒီနေရာက ခဏခဏ
ကားတိုက်မှု ဖြစ်တယ် ။ ဟိုးတလောကတောင် ကျောင်း
ဆရာတစ်ယောက် ကားတိုက်ခံရသေးတယ် ။ ကားတွေ
ကလည်း အရှိန်ပြင်းတော့ ပွဲချင်းပြီးပဲ ။”
နဘေးမှ အဒေါ်ကြီး၏စကားကို ကျွန်မ ခေါင်းတညိတ်ညိတ်
ဖြင့် နားစွင့်ရင်း တစ်စုံတစ်ခုကို ဖျတ်ခနဲ တွေးဆလိုက်မိ၍
နောက်တစ်ကြိမ် ပြတင်းတံခါးမှ ခေါင်းပြူကြည့်လိုက်မိ
သည် ။ ဆေးနီတွေ စွန်းထင်နေသော အင်္ကျီဖြူနှင့်ပုဆိုးစိမ်း
ကို ဝတ်ဆင်ထားသော စောစောကလူကို တရိပ်ရိပ်ပြေး
စပြုနေပြီဖြစ်သော ကားပေါ်မှ ကျွန်မ ရိပ်ခနဲ လှမ်းမြင်လိုက်
“ တောက်…ဘယ်က ဆေးသုတ်သမားလဲ မသိပါဘူး
ကွာ ။ ကားတိုက်မှုဖြစ်ရင် ငါတို့ လျော်ရ ထောင်ကျရ
“ လူတွေကလည်း ခက်ပါတယ် ဆရာရယ် ။ ကဲ…ရုပ်ရှင်
ရုံရှေ့ဆင်းမဲ့သူတွေ ပြင်ထားနော် ။”
ကျွန်မ ရှုပ်ထွေးနေသော အတွေးစများကို သိမ်းဆည်းကာ
ကားပေါ်မှ ဆင်းရန် ပြင်လိုက်သည် ။ ကျွန်မ့တွင် ပစ္စည်း
များများစားစား မပါ…ပိုက်ဆံအိတ်သေးလေးတစ်လုံး ၊
စာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် စာမူတစ်ထုပ်ကို ထည့်ထားသော
လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးသာ ပါသဖြင့် ထိုလက်ဆွဲအိတ်ကို
တစ်ဖက်မှ ဆွဲ ၊ ထီးကို တစ်ဖက်လက်ဖြင့် ကိုင်ဆောင်းရင်း
စာအုပ်တိုက်ဆီသို့ ထွက်လာလိုက်သည် ။
- စာအုပ်တိုက်တွင် စာမူပို့ပြီး အပြန်တွင် ဆူးလေဘုရား
ဖူးမည်ဟု ကျွန်မ ရည်ရွယ်ထားလိုက်ပြီး မိုးသည်းသည်း
တွင် ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လာလိုက်သည် ။ ပိတ်ရက်
ဖြစ်သောကြောင့်ပေလား မသိ…လမ်းတကြောလုံး လူသူ
ကင်းရှင်းနေသလို ခံစားမိသည် ။ ဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း
(ဘားလမ်း)ထိပ် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ရေးဘဏ် အနီးသို့
အရောက် မိုးသည် တဝုန်းဝုန်း တဒိုင်းဒိုင်းနှင့် သည်းသည်း
မည်းမည်း ရွာချလာသဖြင့် ကျွန်မ စာအုပ်တိုက်ဆီသို့ အူလျား
ဖါးလျား ပြေးသွားလိုက်သည် ။ တချို့နေရာများတွင် ရေညှိ
များကြောင့် အနည်းငယ် ချော်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေသဖြင့်
ချော်မလဲစေရန် သတိထားလျှောက်ရသေးသည် ။
- စာအုပ်တိုက်ရောက်တော့လည်း အယ်ဒီတာနှင့် မတွေ့…
အိမ်ပြန်နောက်ကျမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် စာမူကို ပေးခဲ့ပြီး
ကျွန်မ ထွက်လာခဲ့သည် ။ မိုးကား သည်းသည်းထန်ထန်
- ပိတ်ရက်ဖြစ်၍ လူနည်းရသည့်အထဲ မိုးသည်းထန်နေခြင်း
ကြောင့် လမ်းတလျောက်လုံး လူသူ ကင်းရှင်းလျက် ရှိသဖြင့်
အလိုလိုနေရင်း ကျွန်မ ထိတ်လန့်နေမိသည် ။ ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်
စာအုပ် ထည့်ထားသော လက်ဆွဲအိတ်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်
ဆွဲကိုင်ရင်း လက်တစ်ဖက်ကလည်း ထီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်
ကာ လမ်းကို မြန်သထက်မြန်အောင် လျှောက်လာလိုက်ရာ
ကုန်သည်လမ်း အမေရိကန်သံရုံးနားသို့ ရောက်လာခဲ့သည် ။
အမေရိကန်သံရုံးကား သံရုံးဟောင်းဖြစ်သည် ။ သံရုံးရှေ့မှ
တိုင်ကီများက အပြင်လူ ဝင်ရောက်ခြင်း မရှိစေရန် ကာရံထား
ခြင်း ဖြစ်မည် ။ ပလက်ဖောင်းနှင့်ကပ်လျက် ဗန္ဓုလပန်းခြံတွင်
လည်း လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ မတွေ့မြင်ရပေ…။ (၂၀၁၀
လမ်းမကြီးထက်တွင် ကားတစ်စီးတစ်လေ ဖြတ်သန်းသွား
ခြင်းမှအပ တစ်ကြောလုံး လူသူ ကင်းမဲ့နေခြင်းက ကျွန်မ့ကို
ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေ တိုးပွားလာစေသည် ။
“ သမီးလေး…အဒေါ့်ကို ပိုက်ဆံလေးတစ်ရာလောက်
ပေးပါလားကွယ် ။ အဒေါ် ပြန်စရာ ကားခ မရှိလို့ပါ ။”
ရုတ်တရက် နောက်မှ အသံတစ်သံကို ကြားလိုက်ရ၍ ကျွန်မ
အထိတ်တလန့်ဖြင့် နောက်သို့ ဆတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်
တော့ အသက်လေးဆယ်ကျော်အရွယ် မိန်းမတစ်ယောက် ။
အရောင်မွဲမွဲ လုံချည် ချည်ထည် ခပ်နွမ်းနွမ်းအင်္ကျီကို ဝတ်ဆင်
ပြီး ထီးစုတ်စုတ်တစ်ချောင်းကို ဆောင်းထားသော ထိုမိန်းမက
ကျွန်မနှင့် လက်တစ်ကမ်းကျော်အကွာတွင် ရပ်နေသည် ။
- ရုတ်တရက် ကျွန်မ့ဦးနှောက်က အလုပ်တစ်ခုကို လျင်မြန်စွာ
တွေးခေါ်လုပ်ဆောင်လိုက်သည် ။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့်
အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွန်မ လျင်မြန်စွာ ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့
ကျွန်မ ရောက်နေသည့်နေရာက ဗန္ဓုလပန်းခြံ၏အလယ်
တစ်ဖက်လမ်း၌ အမေရိကန်သံရုံး ရှေ့တည့်တည့်လောက်
နေရာတွင် ဖြစ်သည် ။ လမ်းတကြောလုံး၏အလယ်ဗဟို
ဖြစ်ပြီး လူသူကလည်း အလွန်ရှင်းလင်းနေချိန် ဖြစ်သည် ။
မိုးကလည်း သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာသွန်းနေခြင်းကြောင့်
ကျွန်မ အန္တရာယ်ကြုံ၍ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းလျှင်
တောင် ကြားမည့်သူ ရှိမည် မဟုတ်…။ ကျွန်မ ထိုအကြောင်း
အရာတွေကို စက္ကန့်ပိုင်းမျှနှင့် တွေးတောလိုက်ကာ ထိုမိန်းမ
ကို ဖြတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်ပြီး လမ်း၏ထိပ် ယာဉ်ထိန်းရဲတဲ
(အဆောက်အဦးငယ်)ဆီသို့ တအား ပြေးသွားလိုက်မိသည် ။
ကျွန်မ့အတွေးထဲတွင်တော့ ယာဉ်ထိန်းရဲတဲနားမှ သစ်ပင်အုတ်
ခုံလေးများတွင် ဈေးသည်တွေ နားနေ မိုးခိုတတ်ကြ၍ လူသူ
ရှိမည့်နေရာသို့ ကျွန်မ ပြေးလာလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည် ။ ထိုနေရာ
သို့ ရောက်မှ ထိုမိန်းမ ရောက်အလာကို စောင့်ကာ သူ လိုအပ်
နေသော ငွေတစ်ရာကို လှူဒါန်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ပြေးလာ
လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည် ။ တဲနားသို့ ရောက်တော့ ကျွန်မ အမောပင်
မဖြေနိုင်သေးဘဲ ပြေးလာခဲ့တဲ့လမ်းကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့…
“ ဟယ်တော်…ဘယ်…ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ ။”
ပလက်ဖောင်းထက်တွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိ…။
ကျွန်မ တအံ့တသြဖြင့် လမ်းမကြီးထက်ကိုလည်း ဝေ့ဝဲကြည့်
လိုက်တော့လည်း ပကတိ နတ္ထိ ။ ပလက်ဖောင်း၏အလယ်မှ
ယာဉ်ထိန်းရဲတဲဆီသို့ ကျွန်မ ပြေးလာစဉ် ပိုက်ဆံတောင်းသော
ထိုမိန်းမ အဘယ်သို့ ပျောက်ဆုံးသွားသနည်း…။ ကျွန်မ
ယူဆလိုက်မိသည်က လမ်းမထက်တွင် လှည့်လည်နေသော
“ အဲ့ဒါပဲ…မမလတ်ရယ် ။ သမီးဖြင့် အံ့သြလိုက်တာ ။ မလတ်
စဉ်းစားကြည့်…အဲ့ဒီမိန်းမ အမေရိကန်သံရုံးထဲ ဝင်ပြေးရအောင်
ကလည်း လမ်းကူးရင် သမီး တွေ့မှာပေါ့ ။ နောက်ပြီး ဝင်ပြေးလို့
လည်း လွယ်မယ် မထင်ပါဘူး ။ နောက်တစ်ခုရှိတာက နောက်
ကြောင်း ပြန်လှည့်ပြေးရင်တော့ ဟိုဘက်လမ်းကြားထဲ ဝင်သွား
ရအောင်ကလည်း သမီး ပြေးလာတဲ့ဘက်က ပိုနီးတယ်လေ ။
ပြောရရင် သမီး ပြေးထွက်လာချိန်က စက္ကန့်ပိုင်းတောင် မကြာဘူး
နော် ။ ဒီတော့ သူ ပျောက်သွားတာ အံ့သြစရာပဲ ။ သူ ပြေးသွား
တာကို သမီး လှည့်ကြည့်ရင် မြင်မှာပေါ့ ။ နောက်ဆုံး တွေးစရာ
က ပိုက်ဆံလေးတစ်ရာ တောင်းမိတာနဲ့ သူ လှည့်ပြေးဖို့ မလိုဘူး
ကျွန်မ ဆူးလေဘုရားမှအဆင်း ထိုအကြောင်းအရာက
ခေါင်းထဲသို့ တိုးဝင်လာပြန်၍ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ကာ
အိမ်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော အစ်မလတ်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ခြင်း
“ အမလေး…မိနွန်းကို…နင် ကံကောင်းလို့ပါလား ။ နင်
ဝတ်စားသွားတာလည်း ကြည့်ဦးလေ ဂမ္ဘီရဆရာမကြီင်္းရဲ့ ။”
အစ်မလတ်၏စကားကို ကျွန်မ နားမရှင်းသဖြင့် ပြန်မေးလိုက်
“ ဘာကို ကံကောင်းတာလဲ သမီးက ဘာကို ကြည့်ရမှာလဲ
“ သြော်…ခက်ပါ့ ။ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ပြီး ဘာမှ လှည့်လည်
ဝိညာဉ်တွေ ဘဝမဲ့ဝိညာဉ်တွေ လုပ်မနေနဲ့ ။ အဲ့ဒါ နင့်ကို ပစ္စည်း
လုမလို့ ကြံတာဟဲ့ ။ သိပြီလား ။ နင် ဒီနေ့ ဝတ်သွားတဲ့ ဆွဲကြိုး
ရယ် ဟန်းချိန်းရယ်က သူတို့ မျက်စိကျချင်စရာ ဖြစ်နေတာကိုး ။
နောက်ပြီး ဟန်းဖုန်းကို လူမြင်သာအောင် အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်
ထားတယ် မဟုတ်လား ။ နင်က မိန်းကလေး ပြီးတော့ တစ်
ယောက်တည်း ။ မိုးကလည်း သည်းနေတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်
လုံး လူကလည်း ရှင်း…ဒါ့ကြောင့် သူက နင့်အနား ကပ်လာတာ ။
နင်သာ ပိုက်ဆံတစ်ရာ ထုတ်ပေးမယ် ဆိုပြီး ခေါင်းငုံလိုက်တာ
ပိုက်ဆံနှိုက်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် သူက လုတော့မှာ ။ ကံ
ကောင်းချင်တော့ နင်က ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲ
အဆောက်အအုံဆီ ပြေးတော့ သူလည်း နင် အကူအညီသွား
တောင်းတယ် ထင်ပြီး လာလမ်းအတိုင်း လှည့်ပြေးတာ နေမှာ
ပေါ့ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့…တစ်ယောက်တည်း မိုးသည်း
တဲ့နေ့ လျှောက်မသွားပါနဲ့ဆိုတာ ။ လူကဖြင့် ကလေးသာသာပဲ
ရှိသေးတာ တစ်ယောက်တည်း လပ်လျားလပ်လျားလုပ်မနေနဲ့ ။
မြန်မြန် ပြန်လာခဲ့တော့…။ စီးနေကျ ကားပဲစီးနော် ။ မသိတဲ့
ကားတွေ လျှောက်မစီးနဲ့ဦး ။”
အစ်မလတ်က ကရုဏာဒေါသောဖြစ်ကာ ကျွန်မ့ကို ဆူပူကြိမ်း
မောင်းပြီး ဖုန်းချသွားသည် ။ ဘုရားလည်း ဖူးပြီးသွားပြီဖြစ်၍
ကျွန်မ ကားဂိတ်တွင် ကားစောင့်နေလိုက်သည် ။ 43အထူးကား
က သိပ်ကြာကြာ မစောင့်လိုက်ရဘဲ ရောက်လာသဖြင့် ကျွန်မ
အဆင်ပြေမည့်တစ်နေရာတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။
မြောလွင့် ကျွံဝင်နေမိသည် ။ ကျွန်မ့ကို ပိုက်ဆံ လာတောင်း
သော ထိုမိန်းမသည် အမှန်ပင် အကြံသမားတစ်ယောက်လား…
ဒါမှမဟုတ် အမျှဝေစဉ်က ခရီးနယ်လွန်နေသော လှည့်လည်
ဝိညာဉ်ပေလား…ကျွန်မ တွေးဆ၍ မရနိုင်တော့ပါပြီ ။
(ထိုပဟေဠိပုစ္ဆာနှင့်အတူ ကျွန်မ ရရှိလိုက်သည်က မိုးသည်း
သည်းထန်ထန် ရွာနေခိုက် လူသူပြတ်လပ်သည့်နေရာသို့
တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတော့သည် ။)
တစ္ဆေစုံထောက် မိန်းကလေး အပြည့်အစုံသို့ »
6/07/2014 06:29:00 PM ghost
Credit: သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ အပြည့်အစုံသို့ »
၇ – နိုဝင်ဘာ – ၂၀၁၂ အပြည့်အစုံသို့ »
6/03/2014 12:58:00 PM ghost
ကျွန်တော် (၁၀) တန်းရောက်တော့ အဖေ ဆေးပင်စင်နဲ့ တပ်ထဲကထွက်လိုက်ပါပြီ၊ တစ်မိသားစုလုံး ရပ်ကွက်ထဲမှာ အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပြီး နေကြပါတယ်..၊ ကျွန်တော် (၁၀) တန်းဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာ Night Study လုပ်ပါတယ်..၊ ညဆို ၇ နာရီလောက်အိမ်ကသွားရပါတယ်..၊ ကျွန်တော့်အိမ်ကနေ ဆရာ့အိမ်ကို သွားဖို့ဆိုရင် ကုတင် (၁၀၀) စစ်ဆေးရုံထဲကနေ ဖြတ်ရပါတယ်..၊ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်တော့ လမ်းလျှောက် ရပါတယ်..၊
အဲဒီစစ်ဆေးရုံမှာ ရင်ခွဲရုံရှိပါတယ်…၊ စစ်တပ်ဆေးရုံဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ…၊ လေ၀င်ပေါက်မှာ ရှိတဲ့ မှန်တွေက ကွဲနေပြီး အထဲကို အတိုင်းသားမြင်ရပါတယ်..၊ ရင်ခွဲရုံတံခါးကိုတော့ အမြဲတမ်းသော့ခတ်ထားပြီး… အရှေ့မှာ ဆင်ဝင်ပုံစံ ၀ရံတာလေးရှိပါတယ်..၊ အဲဒီဝရံတာလေးမှာ မီးလုံးတစ်လုံးချိတ်ဆွဲထားပါတယ်..
တစ်ည ကျွန်တော် ထမင်းစားရင်းနဲ့ Night Study သွားမယ့်အချိန် တော်တော် နောက်ကျသွားတယ်..၊ အိမ်က စထွက်တော့ကို 7:45 လောက်ရှိနေပြီ..၊ ကျွန်တော်လည်း နောက်ကျနေတာကြောင့် ခပ်မြန်မြန် လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်..၊ ကျွန်တော် လျှောက်နေတဲ့လမ်းက မှောင်ပါတယ်.. ဘာမီးမှမရှိပါဘူး.. ရင်ခွဲရုံနားကို ရောက်တော့ ၀ရံတာမှာ ချိတ်ထားတဲ့ မီးအလင်းရောင်နဲ့ ရင်ခွဲရုံပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရတယ်… ကျွန်တော်လည်းအမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ရင်ခွဲရုံဘက်ကို တစ်ချက်လှမ်း ကြည့်လိုက်တယ်..၊ ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကျွန်တော်အခုထိ ညအိပ်တော့မယ်ဆို မြင်ယောင်နေတုန်းပါ… ကျွန်တော် အဲဒီတုန်းက ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလည်းဆိုတာကိုတော့ စာနဲ့ မရေးပြတတ်တော့ပါဘူး… တစ်ခုသိတာကတော့ ကျွန်တော် ကြက်သီးဖြန်းခနဲထပြီး ခေါင်းကြီးသွားတယ်ဆိုတာကတော့ သိပါတယ်…
မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက.. လေကာမှန်ကွဲနေတဲ့နေရာက ကလေးမလေးတစ်ယောက် ခေါင်းထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို လျှာထုတ် ပြောင်ပြနေပါတယ်.. အသက်က အလွန်ဆုံးရှိလှ (၆) နှစ်ပေါ့..၊ လေကာပြတင်းပေါက်က လူကြီးတစ်ယောက် မတ်တပ်ရပ်နေမှ ခေါင်းမြင်ရရုံလောက်မြင့်တာပါ…။ သူ့အသက်နဲ့ ဒီလေကာပြတင်းကို မီဖို့ဆိုရင် ရင်ခွဲရုံထဲခုံတစ်ခုခုပေါ်ကို တက်ပြီး မြင်ရမှာပေါ့..။
ကျွန်တော် ယောင်ယမ်းပြီး မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တယ်.. ပြီးတော့ ပြန်ဖွင့်ကြည့်တယ်… ကလေးမလေးက ရှိနေတုန်းပါ… ကလေးမလေးက ချစ်စရာလေးပါ.. ဆံပင်နှစ်ဖက်ကိုချီထားတယ်..၊ ပါးနှစ်ဖက်မှာ ပါးနီတွေ ဆိုးထားသလို နီနီရဲရဲလေးဖြစ်နေတယ်.. ပထမကတော့ ကျွန်တော်ကြောင်ကြည့်နေမိတယ်..ဒါပေမယ့်…. ဒီလိုအချိန်… ဒီလိုလူသေတွေထားတဲ့ ရင်ခွဲရုံထဲမှာ ရိုးရိုးလူ ရှိမနေနိုင်ဘူးလို့ တွေးမိတာနဲ့ ကျွန်တော်ဆရာ့အိမ်ရောက်တဲ့ အထိ တောက်လျှောက်ပြေးခဲ့ပါတော့တယ်…၊
ဒီတစ်ကြိမ်လည်း ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လောက် ဖျားလိုက်ရပါသေးတယ်…။
ကျွန်တော် ပြန်တွေးကြည့်မိတာက ဒီကောင်မလေးက ကျွန်တော်နဲ့လည်းမသိပဲ ဘာလို့ ကျွန်တော့်ကို လာပြီး စနောက်ချင်တာလဲဆိုတာကိုပါ..၊ တစ်ခုရှိနိုင်တာက ကောင်မလေးက မနေ့ တနေ့က ဆေးရုံမှာ ဆုံးသွားမယ်..၊ ရင်ခွဲရုံထဲမှာ ထည့်ထားမယ်..၊ သူ့ဝိဥာဉ်ကလည်း အဲဒီမှာပဲ ရှိနေမယ်..၊ အဲဒီချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို မြင်တော့ ကလေးတို့ သဘာဝ စချင်နောက်ချင်လို့ အပျော်သဘောသက်သက် လျှာထုတ် ပြောင်ပြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..၊ ကျွန်တော် ဖျားပြီး ပြန်သက်သာတော့ အဲဒီလမ်းကို တစ်ယောက်တည်း မသွားရဲ လို့ အဖော်ခေါ်ပြီး သွားရပါတယ်..၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီကောင်မလေးရဲ့ အရိပ်အယောင်တော့ လုံးဝမတွေ့ရတော့ပါ ဘူး…၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးမလေး အဲဒီဘ၀ကနေ လွတ်ကျွတ်သွားတာဖြစ်ပါစေလို့ အခုထိ ဆုတောင်းဆဲပါ….
6/02/2014 08:24:00 AM ghost
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ လောက်ဆီကပါ အဲဒီအချိန်တုန်းဆီကမေမြို့မှခုလောက်တည်းခိုခန်း
Taxi Driver ဦးလေးကြီး..သူသရဲခြောက်ခံရတဲ့အကြောင်း(ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန်)
5/31/2014 11:42:00 AM funny ghost
ကျွန်တော်ကြားဖူးသော သရဲ အခြောက်ခံရသောပုံပြင်တစ်ပုဒ် ကိုပြောပြပါမည်…..(ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန်)
တစ်လောက..Taxi စီးရင်း..Driver ဦးလေးကြီးက..သူသရဲခြောက်ခံရတဲ့. အကြောင်းကိုပြောပြတယ်..
Credit: Thae Su San အပြည့်အစုံသို့ »
5/30/2014 10:43:00 AM celebrity-news ghost
အိပ်နေသောစင်က သိမ့်ကနဲလှုပ်သွားသည်။မျက်စေ့ကို ချက်ခြင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်၍ အနားကို အကဲခတ်လိုက်တော့လည်း နီးနီးနားနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိ။ဒီတစ်ကြိမ်ဆိုလျှင် ကျော်ကျော် (မင်းမော်ကွန်း) တက်အိပ်နေရသည့် အလောင်းတင်စင် (ထော်လီ) လှုပ်သွားသည်မှာ သုံးခါတိတိရှိခဲ့ပြီ။
ကူဖော်လောင်ဖက်လိုက်သည့် တပည့် ကျော်မျိုးအောင်ကလည်း ကားပေါ်စီးကရက် ဗူးသွားယူသည်မှာ ခုထိပေါ်မလာသေး။ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ရိုက်ကူးရေးအတွက် မီးချိန်နေသော စက်အဖွဲ့သားများက ကိုယ်စီအလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။ ဦးမျိုးကဇတ်ညွှန်းကို ဖတ်ယင်း တစ်နေရာမှာထိုင်လျှက်။
မိမိတို့အဖွဲ့နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှောင်ရိပ်အစပ်မှာ မိမိကိုမိုက်ဂိုက်နှင့် ခါးထောက်ကြည့်နေသူတစ်ဦး။အပေါ်ပိုင်းအကျီမပါ၊
“ဟေ့ကောင် ချက်ချင်းလှည့်မကြည့်နဲ့နော်၊ မှောင်ရိပ်စပ်ဆိုင်းဘုတ်နားက၊ ဂတုံးနဲ့လူကို
တွေ့လား”…။” ဘယ်တစ်ယောက်လည်း ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါဘူး ”.. မျိုးအောင်စကားဆုံးသည်နှင့် ကျော်ကျော်ခုနနေရာကို
လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ထိုသူမရှိတော့။ စိတ်
အချိန်ကည ၉ နာရီ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်လောက်ကပါခင်ဗျာ။အဲဒီ
ကူးခဲ့ပါတယ်။ကျော်ကျော်က HIV ကူးစက်ခံ
Credit: Zin Wyne Facebook အပြည့်အစုံသို့ »